Ogaden News Agency (ONA) – Dood Cilmiyeed ku aadan Maxkamada ICC oo ay ka qeyb galeen Ururka OYSU Capetown
Dood Cilmiyeed ku aadan Maxkamada ICC oo ay ka qeyb galeen Ururka OYSU Capetown
Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee Wadanka South Afrika oo hormuud u yihiin maamulka Jaaliyada iyo Ururweynaha OYSU faraca faraca Capetown ayaa ka qeyb galay Shirweyne caalami ah oo looga doodayay Maxkamada ICC qaab shaqeedkeeda. Ururka OYSU South Afrika ayaa munaasaadan si nidaamiyan ah (Official Invitation) loogu casuumay munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay Haayada “Centre of Conflict Resolution Capetown”.
Jaaliyada Ogadeniya ee South Afrika waxaaa munaasabadan uga qeyb galay Ururka OYSU Capetown iyo Xubno kamid ah Jaaliyada JOKA.
Mudane Abshir Maxamed Fatuule, Xoghayahaya OYSU Capetown, oo waftigan Jaaliyada Ogadeniya South Afrika uga qeyb galay shirkan hoggaaminayay waxaa ku weheliyay shirkan Hoggaanka Warfaafinta OYSU Halgame Cabdi Jamaal Cabdullaahi iyo Hoggaanka Dhaqaalaha Jaaliyada Ogadeniya ee Cape Town Mudane Nuur Cabdi.
Ururka OYSU South Afrika oo waayadanba waday olole ay ku baadi goobayaan haayadaha Xuquuql insaanka iyo goobaha sida dhabta ah looga doodo lagana hirgaliyo qaabka loo qaado danbiyada ka dhanka ah xuquuql insaanka ayaa dadaal dheer kadib ku guuleystay in goobaha heerkan oo kale ah ay ka qeyb qaataan.
Shirkan dood cilmiyeedka ahaa ee looga doodayay Qaab shaqeedka maxkamada ICC ee fadhigeedu yahay Magalada Hague ee wadanka Netherlands waxaa kasoo qeyb galay khubaro caan ku ah xeer ilaalinta iyo masuuliyiin u qaabilsan arrimahan. Waxaana kamid ahaa dood cilmiyeedkan ka qeyb qaatay
MS Yaasmiin Sooko, Madax xafiiseedka Haayada Xuquuqul insaanka “Foundation For Human rights Johannesburg
Dr Dan iyo Nicole.
Ms yaasmiin iyo Nicole ayaa soo bandhigay taariikhdii Maxkamada Caalamiga ah ee ICC iyo xidhiidhka ka dhaxeeya Afrika. Waxay ka hadleen wadamada Afrika madaxdooda lagu qaaday danbiyadii ay galeen Maxkamada ICC. iyaga oo soo qaatay Wadanka Sudan, Kenya, Congo, Mali, Libya iyo wadamo kaleba. Waxayna dooda ku saleeyeen in shaqo wanaagsan ay qabatay ICC balse loo baahanyahay in madaxda Afrika ay kaalintoda kasoo baxaan ku aadan sidii danbilayasha daggaal ama kuwa ku kaca waxyaalaha ka dhanka ah xuquuqda aaadamaha sidii loo geyn lahaa maxakamada caalamiga ah ee ICC.
Dr Dan ayaa isagu sheegay in Maxakamada ICC waxba u qabanin wadamada Afrika oo wali kiisaskii Afrika laga gudbiyay miiska saaranyihiin tusaale ahaan Madaxwehnaha Sudan wuu ka bad baaday in lagu qaado xukunkii maxkamada. Waxay ICC marka Afrika laga hadlayso ay qiimeysa sidii xasilooni loo gaadhsiin lahaa iyaga oo ka tanaasula in danbilayaasha lagu helo danbi maxkamada lagu qaado. Tusaale ahaan wadanka Sudan, in madaxweyne Bashiir lamaxkamadeeyo oo danbigiisi lagu qaado waxaa laga door biday in xal nabadeed lagaadho oo South Sudan madax banaani hesho. Danbiyadii daggaalna halkaas lagu tirtiro.
Xoghayaha OYSU Mudane Abshir Maxamed Fatuule oo dood cilimiyeedkan ka qayb qaatay ayaa isagu soo bandhigay taariikhda tacadiyada laga geystay dhulka Ogadeniya. Xoghayaha ayaa sheegay in wadamada maanta laga doodayo ee Afrika ay dhamaantood yihiin dhul danbiyadii daggaal ee ka dhacay laga heli karo saxaafada madaxa banaan, haayadaha xuquuql insaanka, Qaramada Midobay iyo wadamo badan oo haya fal danbiyeedkii goobahaas ka dhacay. Meesha aan ka hadayo Waa Ogadeniya e, ma jiraan cid madax banaan oo gali karta oo maanta heysa keydka dadka mudada qarniga ah lagu xasuuqayo Ogadeniya, Waxaa loo diiday saxaafadi xorta aheyd ee caalamka, Haayadihii UN-ta, kuwii xuquuqul insaanka.
Xoghaye Abshir ayaa hadalkiisa kusoo gabagabeeyay su’aal uu dhex dhigay shirweynaha midaas oo aad looga dooday noqotayna su’aasha ugu muhiimsaneyd ee waqti dheer laga faalodo talooyin iyo tusaalayaal badana laga bixiyay.
Xogahayaha Su’aashiisa ayaa aheyd wadanka noocaas ah, Ethiopia sidee ayaa maxkamada ICC loo geyn karaa?
Ugu horeyntiiba waxaa su’aashan talooyin iyo taariikh kooban oo Ethiopia ku saabsan dhiibtay Marwo Yaasmiin Sooko, madaxa machadka xuquuql insaanka Johannesburg oo sheegtay in Ethiopia ay kamid tahay wadamada aan saxeexin xeerka ICC, midaas oo ka dhigaysa inay ka gabato xeerar lagu qaado. Wadamada aan saxeexin waxaa kamid ah wadanka Zimbabwe.
Marwo sooke ayaa sheegtay in shacabka Ogadeniya ay nasiib badanyihiin, waayo waxaad maanta ku sugantihiin wadanka South Afrika oo aad si dhib yar danbiyada Ethiopia aad uga furi kartaan maxkamada sare ee South Afrika. Sida Wadanka Zimbaabwe looga furey danbiyada ay galeen wadankan oo kale midaas oo saamaxaysa in Danbilayasha daggaal ee dhulka Ogadeniya danbiga ka geystay loogu qaado xukunkooda wadankan South afrika.
Ururka dhalinyarada OYSU faraciisa Capetown ayaa shirkan kasoo hooyay guulo aad u waaweyn, iyaga oo xidhiidho badan oo aad u adag la yeeshay masuliyiin meeqan sare ka jooga baadhista danbiyada caalamiga ah gaar ahaan kuwa xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqul aadamaha danbiyadooda la qaadi kari waayo. Waxaana xidhiidhadan oo joogta ah kala socon doona dhaq dhaqaaqa OYSU South Afrika ka wadaan wadanka South Afrika sidii loo xukumi lahaa danbiilayasha kamidka ah masuulyiinta Ethiopia ee sida toska ah Ogadeniya fal danbiyeedka ka geystay.
Jaaliyada Ogadeniya ee wadanka South afrika ayaa sanadkii 2012 Maxkamada sare ee South Afrika ka furay kiis danbiyeed oo agu oogayo danbiilaysha Ehiopia ee ogadeniya xad gudubyada ka geystay.